Ujeedka Dawladdnimo: ma dhisid baa mise waa dhawrid?! W/Q: Cabdiraxmaan Faarax Xaashi (cawaale) | Laashin iyo Hal-abuur
Ugu danbeyntii, ahmiyaddu waa in wax la dhawro, ee maahan wax dhisid kaliya. Si loo hiigsado yoolkaas waxaa lama huraan ah in siyaasiyiintu fahmaan muhiimadda dhisidda dawladda iyo dhawritaankeeda, isla markaana lagu abaabiyo jiilka soo koraya jeclaanshaha wax guud, taasna waxay ku imaanaysaa in dadka quluubtooda lagu abuuro sarraynta iyo tixgalinta qaanuunka. Waana in hooya kasta ee Soomliyeed ku huuwaawisaa dhallaankeeda sidii uu ugu hadaaqi lahaa dawlad jacaylka marka uu hanaqaado, waa in lagu qoraa buugaagta higgaadda laga barto; waa in lagaga wacdiyo masaajidda iyo goobaha Ilaah lagu caabudo; loogana naadiyo golayaasha sharci dajinta; laga dhaqan galiya maxkamadaha caddaaladda iyo garsoorka; waa in laga dhigtaa diinta siyaasadeed ee dalku leeyahay, markaas ayaa laga yaabaa in la helo dad wax dhisto, haddana dhowrta waxay dhisteen.